💹 Forex. Yemahara kurodha pasi kwekuzvimirira ongororo yevanopa mazano, zviratidzo
Wongorora yakanakisa nyanzvi Forex yekutengesa marobhoti, nyanzvi vanachipangamazano (EAs), zviratidzo, vanopa masaini. Enzanisa ivo zvinoenderana nekuita kwavo uye kuita kwavo. Yakasimba Rating system.
Akanyanya Nyanzvi Advisors 2021MT4 Forex Maitiro Nyanzvi Advisors MT4 Zviratidzo MT4 Maraibhurari MT4 Zvishandiso MT4MT5 Forex Maitiro Nyanzvi Advisors MT5 Zviratidzo MT5 Maraibhurari MT5 Zvishandiso MT5
sununguka wongororo yevanachipangamazano nyanzvi, zviratidzo, nzira dzekutengesa uye zvinyorwa zvemusika wepamberi
Chikwata chedu chinoshanda zuva nezuva kuwana zvitsva zvinoitika kumusika wepamberi. Yedu saiti haina zvachose kushambadzira. Basa redu guru nderekuwana marobhoti epamberi anobatsira chaizvo uye zviratidzi zvinobatsira zvevatengesi, zvichibva pakuongorora kwakazvimirira.
Yakanyanya kuyerwa MT4 Nyanzvi Advisors muna 2021
Maitiro ekutengesa anoshandiswa murobhoti anoenderana nekuongororwa kwehuwandu. Kuongororwa nezviratidzo gumi nezvitanhatu zvemusika we Forex zvinoshandiswa. Iyo inotarisirwa nekumisikidza mashoma paramende eiyo algorithm kodhi. Iwo makuru maficha erobhoti akaiswa pawebhusaiti https://elonmuskea.com/ anotevera:
Akanyanya Nyanzvi Advisors 2021 Nyanzvi Advisors MT4 Nyanzvi Advisors MT5 MT4 Forex Maitiro
Mutengo - 499 USD
EA inoshandisa mazana enzira dzakasiyana. mhanya akawanda marongero panguva imwe chete. Sarudza zvirongwa zvako uye uvake yako tsika portfolio. Tsiva nzira chero nguva. Mhanya akawanda portfolio neiyi EA. Maitiro ese anotanga zvikamu. Mamwe marongero anowana akawanda mibairo kupfuura mamwe akawanda. NePortfolio X kuitisa imwe inogona kumhanyisa nzira dzakawanda kuitira kuti purofiti yemaitiro anoshamisa abhadhare kuwana kurasikirwa kubva kune vamwe, ichiburitsa ruzha rwakaringana. Teregiramu Boka rePortfolioX Nhengo dzeMT5 musiyano pano General ruzivo rwekushandisa Dhawunirodha yakamisikidzwa faira pano iri zano rakanaka kudzosera iyi EA usati waimhanyisa kumaakaundi ako ekutengesa. Gadza VhoriyamuByRisk kune CHOKWADI CHIRATIDZO: Multiple Chart Nguva Yakatarwa: default default EURUSD H1 ACCOUNT MODE: Hedging accountIyi EA inokwanisa kumhanyisa nzira dzakawanda panguva imwe chete kubva kuzviratidzo zvakawanda uye nguva dzeNguva dzinozowedzerwa, kutsiviwa kana kubviswa pakuvandudzwa sezvo zvitsva zvawonekwa. Ndine maseva anoramba achitsvaga ari nani. Anoita nzira EURUSD_H1_STRATEGY_SET_02 (135 nzira) EURUSD_H4_STRATEGY_SET_02 (85 nzira) EURUSD_D1_STRATEGY_SET_02 (207 nzira) USDJPY_H1_STRATEGY_SET_01 (91 nzira) USDCHF_H1_STRATEGY_SET_01 (nzira 106) AUDUSD_H1_STRATEGY_SET_01 (154 nzira) AUDUSD_D1_STRATEGY_SET_01 (37 nzira) CADCHF_H1_STRATEGY_SET_01 (88 nzira) EURAUD_H1_STRATEGY_SET_01 (137 nzira) GBPCAD_H1_STRATEGY_SET_01 ( Nzira gumi nematanhatu) GBPCHF_H156_STRATEGY_SET_1 (nzira zana nemakumi maviri) GBPUSD_H01_STRATEGY_SET_120 (nzira 1) NZDUSD_H01_STRATEGY_SET_127 (nzira 1) * MT01 inogona kutengeserana neupenyu […]
Akanyanya Nyanzvi Advisors 2021 Nyanzvi Advisors MT4 MT4 Forex Maitiro
Mutengo - 1 399 USD
North East Way EA ndeye otomatiki dhizaini yekutengesa yekutengesa iyo inotengesa pane isiri-inochinja pamuchinjikwa vaviri vaviri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. iyo yese yekutengesa system inoshandisa iyo yakakosha pateni yemusika musika-kusavapo kwenguva refu-kwekutungamira mirawo pamwe nekudzoka kwese kwemutengo kune avhareji kukosha. Fast Way Fast Way MT15 mazano ekugadzirisa: Unogona kutanga kutengesa pane ese akatsigira mari maviri maviri panguva imwe chete uchishandisa mumwe muenzaniso weiyo Nyanzvi Advisor ne "AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD" marongero. Iyo account balance yekushandisa iyo Nyanzvi Advisor pane ese anotsigirwa mapara anofanirwa kuve angangoita madhora mazana mashanu. Iyi EA haina hanya nekupararira kana kutsvedza. Ndapota shandisai chete yakakurudzirwa mari yemaviri. Kuedza iyo Nyanzvi Advisor: Unogona kuyedza iyo EA zvese zviri zviviri vaviri vaviri uye mune yakawanda-mari modhi. MuMT5, iyo yakawanda-mari yekuyedza modhi inotsigirwa. Unogona kuyedza Nyanzvi Advisor mune "yakavhurika mitengo" maitiro. Sezvo iyo EA inoshanda chete pakuvhurwa kwebhawa yega yega inotevera, iyi modhi haizokanganisa mhedzisiro, asi kuyedza kuchakurumidza. Edza iyo EA chete pane iyo M500 nguva yakatarwa. Kune mamwe nguva, iyo EA haina kupihwa-kupihwa. Edza iyo […]
Akanyanya Nyanzvi Advisors 2021 Nyanzvi Advisors MT5 MT5 Forex Maitiro
Mutengo - 999 USD
"Kutsiga" ndeye 100% inoshanduka nyanzvi chipangamazano zvichibva pakufamba kwemutengo. iyo yakavakirwa-mukati Smart Kudzoreredza algorithm. kungotengesa kamwe chete panguva. kushambadzira kwese kunosanganisira Stop Loss uye Tora Kubatsirwa kubva pakutanga chaipo, uye hazvichinje.Izvi ndezvevaya, vari kutsvaga kukura kwakadzikama uye kwakadzikama pamusoro penguva refu. shandisa mutengo wakaderedzwa. Mutengo uchawedzerwa kusvika pamadhora 1299 musi waNdira 1-st. ”Akadzikama” eMetaTrader5 iri pano: https://www.mql5.com/en/market/product/56240Yakakurudzirwa maparaMandinofarira ndiwo EURUSD, EURJPY. Iwe unogona zvakare kuyedza mamwe mapara ane mamwe maitiro anochengetedza "Akadzikama" haasi broker ane hanya, unogona kusarudza chero broker waunovimba naye. Iko kushomeka kwekupararira kuri, zvirinani Zvinokurudzirwa zviyero zviri 1: 100 uye 1: 500 iri nani .Nguva yeChati yeiyo chaiyo kuuraya chaiko haina basa. Asi, ita shuwa kuti iwe une ese nguva yenguva dhata inowanikwa munhoroondo centre (F2) YAKADZIDZISWA IN MT4 iyo nguva yakatarwa inofanirwa kunge iri M1. Iwe zvakare unofanirwa kurodha ese aripo mafungidziro muMT4. MuMT5 chero nguva yakatarwa yekuyedza kumashure ichashanda. Base Roti, pairi yega 1000 yeBhalance - inoisa mujenya. Inotarisirwa seBaseLot * (Balance / 1000). Saka, kana iwe uine Akaundi ine 2000USD uye Base yakawanda iri 0.05, yako yaunotengesa ichave 0.05 * (2000/1000) = 0.1Recovery Aggression - "Steady" ine […]
Nyanzvi Advisors MT4 MT4 Forex Maitiro
Mutengo - 50 USD
EA Goridhe zvigadzirwa inyanzvi Advisor yakagadzirirwa chaizvo yekutengesa goridhe. kuti basa racho rakavakirwa pakuvhurwa kwemirairo pane iyo Gold zvishandiso chiratidzo, saka pro Advisor inoshanda pane "maitiro Tevedzera" chirongwa, zvinoreva kutevedzera maitiro. Yechokwadi-nguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Teregiramu boka pano teregiramu chiteshi apa PARAMETERS Vhura mhando nyowani nhevedzano - kuvhura / kudzima kutanga kweiyo nyowani yekutenga akateedzana. Tanga mijenya - iyo yekutanga mijenya. kutengwa kwekutengeserana - tendera Nyanzvi Chipangamazano kutenga. Musika wekutengeserana - tendera nyanzvi Chipangamazano kutengesa. Shandisa ruzhowa-kana basa racho ragoneswa, iyo EA inotengesa zvese kutenga nekutengesa mafambiro, kana basa racho rakaremara, iyo EA
Mutengo: $ 699 6 of 10 makopi asara pamutengo uyuNext price $ 799Live signal https://www.mql5.com/en/signals/866039HIGLY RECOMMENDED BROKER FOR EUROMASTERTelegram channel: https://t.me/aura_gold_eaEuro Master is advanced, zvoga nyanzvi Nyanzvi yakatanga kutengeserana neEURUSD. Nyanzvi dzinoshandisa yakasarudzika yekuchenjera tekinoroji yekuongorora kwemusika kuti vawane akanakisa ekupinda mapoinzi. EA ine yega-inoenderana pamusika algorithms ine yekusimbisa yekudzidza zvinhu. Yekusimbisa muchina kudzidza unosiyana neyakacherechedzwa kudzidza nenzira iyo isingade yakanyorwa yekuisa / kuburitsa mapaundi kuti avepo, uye hazvidi zvidiki-zvidiki zviito kuti zvinyatso gadziridzwa. Panzvimbo pezvo rinotarisa pakutsvaga chiyero pakati pekutsvaga (kwenzvimbo isina kudzidza) nekushandisa (kweruzivo rwazvino). Nyanzvi dzakaratidza mhedzisiro yakagadziriswa paEURUSD mune 2004-2020 nguva. Hapana nzira dzine njodzi dzekushandisa mari dzinoshandiswa, hapana martingale, hapana grid kana ruzhowa. Inokodzera chero mamiriro broker. Kushanda chiratidzo EURUSD Kushanda Nguva Yakatarwa: M5 Min dhipoziti: $ 100 Maitiro: Hapana martingale, grid, ruzhowa kana dzimwe nzira dzine njodzi dzemari manejimendi dzinoshandiswa Hard stop kurasikirwa uye kutora purofiti kuchinzvimbo chega chega Kwete kutarisisa kune broker mamiriro Zviri nyore kuisa Zvirongwa: AutoLot (Percent weDepo weDhipatimendi) - otomatiki mijenya kukarukureta mune pecents dhipoziti Gadzirisa Roti (kana 0 ipapo Auto) - Gadzira yakawanda Hora Kuvhura Kutengesa - Kutanga awa kuvhura emabasa Minute Kuvhura […]
Mutengo - 447 USD
10% Kutengesa Zororo! Mutengo wakazara ($ 497) 10% Kutengesa Zororo! Mutengo wakatarwa ($ 497) Iyo Ranger EA ine pakureba kwazvo kumberi kwerondedzero yemwedzi gumi nemaviri! Iyo EA ine nhoroondo refu yekumashure makore gumi ichishandisa 12% simulating mhando! Ranger EA V10 Dhata rekudzosera kumashure rinoratidza kuti hapana mwedzi unorasikirwa pamakore gumi! Yakafungidzirwa kuwana pamwedzi ye99.90-3.61% pamwedzi (default masisitimu) kutangazve svondo rese zviitiko zveGGPCAD
Ndiri kufara kugamuchira imwe kune ese peji rewebhu yechigadzirwa changu - ini ndiri munyori wayo Vasily Strukov. Nyanzvi Nyakupa mazano iri nyore uye nyore kushandisa - ingoisungirira iyo uchishandisa default masetingi eurusd gbpusd nzdusd audusd m5. Kuti uwane mhedzisiro, zvinokurudzirwa kudzima nzira yekutengesa pane nyanzvi Chipangamazano bhodhi pagrafu - "kutengeserana kwekutenga" (giravara rakasvibirira pane rinoreva kuti Nyanzvi Advisor inobvumidzwa kutenga, tsvuku izvo zvisiri pamutemo) kana "kutengeserana tengesa ”(saizvozvowo). Ini ndinoona iko kwekutengeserana ndichishandisa iyo yegoridhe zvinhu chiratidzo. Iyo nyanzvi Advisor ine 4 nzira - pa stochastic, RSI, MA uye vededenie maodha anovhurwa nemushandisi, avhareji inoshandiswa.Ungawedzera maodha chero nguva - nekungovhura iwo, nyanzvi Nyakupa mazano anozovatongawo, kunyangwe iwe ukavhura ivo kubva kumagumo pafoni yako. Mazuva ese ini ndinoburitsa marongero angu muboka redhiragi, tibatane. Ini ndichapindura chero yemibvunzo Yako, ndichave unofara kuve unobatsira. Yechokwadi-nguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Chinyorwa chehunyanzvi Nyakupa mazano chakabatanidzwa mune yakataurwa 867 Real-nguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Chinyorwa che […]
Mutengo - 312 USD
10% Kutengesa Zororo! Mutengo wakazara ($ 347) 10% Kutengesa Zororo! Mutengo wakazara ($ 347) Iyo Pinpoint EA ndiyo mhedzisiro yemasvondo matanhatu ekuyedza kuvaka EA iyo yakagadzirira kudzoreredza zvakachengetedzeka pakurasikirwa kwezvekutengesa pamusoro pemakumi gumi neshanu emakore ekudzokera shure. win rate uye haasati ambodonhedza anopfuura maviri emabasa mumutsara mumakore gumi nemanomwe ekuyedzwa paGU neEU. Iyo EA inotengesa ingangoita pamabhesi ezuva nezuva uye inoburitsa muhoro vhiki rega! Pinpoint V6 Backtest dhata inoratidza 17% kukunda mwero pamusoro pemakore gumi nemanomwe! Yakarongedzwa pamwedzi purofiti ye94% pamwedzi (default masisitimu) Anotengesa vhiki rega rega Anotengesa iyo EURUSD
Mutengo - 149 USD
EK ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ REKUPEDZISIRA VHIKI YAKABUDISWA MITENGO !!! 🏃 🏃 🏃 kumisikidza mafaira (2 hunhu): / GOLD_M5. seti / GOLD_M15. seti / GOLD_H1. setThis pro Advisor zvechokwadi ichave yakanyatsogadzirirwa iyo XAUUSD (GOLD) set. Iyi ndiyo zano rezvemashandiro rinoshandisa iyo TrendLine PRO chiratidzo uye mashandisiro pane M1-M15 nguva yakatarwaMudzidzisi wezano ane nhare yekutengesa nhare yekubata otomatiki mabasa ekutengesa uye kugona kuvhura mashandisirwo nemaoko. Zvese zvekutengesa zvakavhurwa kubva kumutengesi mune echinyorwa modhi zvingangovharwa pamwe nekuwana uchishandisa iyo DD inoderedza marongero eMabasa. Tinogona kutaura kuti chiitiko chehunyanzvi Chipangamazano ndechekuunza kumwe kutengeserana kuita purofiti
zvegoridhe zvinhu Kudzoreredza EA inyanzvi Advisor iyo inoshanda pane yegoridhe Stuff maitiro index. kana iyo tsika ikachinja (chiratidzo chevara chinoshanduka), iyo EA inovhara iyo kutenga uye inoivhura munzira yakatarisana. panguva imwechete, ine mukana wekuvhura gadziriro ine yakakwenenzverwa mujenya kana imwe cheteyo. Hazvishandisi iyo yekutenga grid. Mhedzisiro-yenguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Yechokwadi-nguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Teregiramu yakatarwa pano teregiramu chiteshi pano MAPARAMEITI Teregiramu yakaiswa pano teregiramu chiteshi pano Teregiramu yakaiswa pano teregiramu chiteshi pano MAPARAMETERS Vhura tambo nyowani - pa / kudzima kutanga kweiyo nyowani yekuteedzana nhevedzano. Tanga mijenya - iyo yekutanga mijenya. Kutenga kwekutengeserana - tendera nyanzvi Chipangamazano kutenga. Kutengesa Kutengesa - tendera nyanzvi Chipangamazano kutengesa. Shandisa ruzhowa-kana basa racho ragoneswa, iyo EA inotengesa zvese kutenga nekutengesa madhairekisheni, kana iro basa rikaremara, iyo EA inotengesa chete nzira. Shandisa Mari Manadgement - on / off uchishandisa otomatiki kura kuverenga. Autolot. Mahara emahara kune yega yega 0.01 mijenya - huwandu hwemahara yemahara yekuvhura yega yega 0.01 lot unit. Roti miltiplier- iyo yekuwanza chinhu yemujenya kana uchinge wagamuchira kurasikirwa. TP-tora […]
manzwiro EA-anoshanda nezve iyo Momentum index, inova inotungamira index. kuti apinde chinzvimbo, Nyanzvi Advisor inoshandisa iyo yakanyanya kuwanda kana yakanyanyisa nzvimbo yechiratidzo, kubata iyo "mood" yevatengesi. mhedzisiro-yenguva mhedzisiro inogona kutariswa pano chaiyo-nguva mhedzisiro inogona kutariswa pano Teregiramu yakagadzwa pano teregiramu chiteshi pano MAPARAMEITI Teregiramu yakaiswa pano teregiramu chiteshi pano Teregiramu yakaiswa pano teregiramu chiteshi pano MAPARAMETERS Vhura tambo nyowani - ku / kudzima kutanga kweiyo nyowani yekuteedzana nhevedzano. Tanga mijenya - iyo yekutanga mijenya. Kutenga kwekutenga - rega iyo nyanzvi Chipangamazano kuti itenge. Musika wekutengeserana - tendera nyanzvi Chipangamazano kutengesa. Tsigira zvinyorwa zvemanyore - on / off yekuchengetedza mirairo yakatanga kubva kumushandisi nenyanzvi Advisor. Shandisa ruzhowa-kana basa racho ragoneswa, iyo EA inotengesa zvese kutenga nekutengesa madhairekitori, kana iro basa rikaremara, iyo EA inotengesa chete nzira. Shandisa Mari Manadgement - on / off uchishandisa otomatiki kura kuverenga. Autolot. Mahara emahara kune yega yega 0.01 mijenya - huwandu hwemahara yemahara yekuvhura yega yega 0.01 lot unit. Roti miltiplier- mijenya yekuwedzera chinhu kune anotevera maodha. TP-tora purofiti, mumapipi. SL-kumisa kurasikirwa, mumapipi kubva pane yekutanga odha. Grid Nhanho […]
Mutengo - 2 030 USD
default zvigadziriso: EURUSD M5 email: [email inodzivirirwa] teregiramu ya pm: @leontolstoy ⚡️ mutengesi? Joinha isu - iro boka riri muteregiramu ⚡️ default masisitimu: EURUSD M5 email: [email inodzivirirwa] teregiramu ya pm: @leontolstoy ⚡️ mutengesi? Joinha isu - boka riri muteregiramu ⚡️ ✔️ Real chiratidzo chine nhoroondo yeanopfuura makore 1.8. Yega Server server GoGoPips.com yenhau uye nehunyanzvi online yekutengesa kutonga system: Kuwedzera kune yakajairwa nhau kendari, Stenvall Invest ine yakasarudzika yepamhepo firita inovhara kutengesa panguva yezviitiko zvakakosha. Haufanire kuremadza / kugonesa kutengesa, Stenvall Invest ichaita zvese otomatiki; ✔️ Remote ziviso system, kwaunogashira mameseji anodikanwa akananga kuchati yeEURUSD pasina kushanyira zvimwe zviwanikwa nekutsvaga ruzivo; Yega Server server GoGoPips.com yenhau uye nehunyanzvi online yekutengesa kutonga system: Kuwedzera kune yakajairwa nhau kendari, Stenvall Invest ine yakasarudzika yepamhepo firita inovhara kutengesa panguva yezviitiko zvakakosha. Iwe haufanire kuremadza / kugonesa
Mutengo - 35 USD
kuongorora kwebasa chairo, kuwedzera kune zvimwe zviitiko zvangu zvinogona kuonekwa pano: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Telegram iri pano. Kurudziro Mari yemaviri pairi EURUSD Nguva furemu M15 Yakakurudzirwa Dhipatimendi chiuru chemadhora kana masendi Makurudziro akarongedzerwa Iwo ekumisikidza kusarongeka kwekutarisa kwebasa chairo, kuwedzera kune zvimwe zviitiko zvangu zvinogona kuonekwa pano: https://www.mql1,000.com/ru/users/mechanic/ mutengesi Teregiramu iri pano. Kurudziro Mari yemaviri pairi EURUSD Nguva furemu M5 Yakakurudzirwa Dhipatimendi chiuru chemadhora kana masendi Makurudziro akarongedzerwa Iwo ekumisikidza kusarongeka kwekutarisa kwebasa chairo, kuwedzera kune zvimwe zviitiko zvangu zvinogona kuonekwa pano: https://www.mql15.com/ru/users/mechanic/ mutengesi kuongorora kweicho chaicho basa, kuwedzera kune zvimwe zviitiko zvangu zvinogona kuonekwa pano: https://www.mql1,000.com/ru/users/mechanic/seller Recommendations Mari yemaviri EURUSD Nguva furemu M5 Yakakurudzirwa Dhipatimendi madhora chiuru kana masendi. default zvigadziriso nyowani Nyowani-kana iyo modhi yaitwa pairi, iyo EA inoshanda isingamire, kana iyo modhiyo yadzimwa, iyo EA haizovhure mitsva mitsva kupera kwemitezo yekutengeserana; Trade Tenga - pa / kure kuvhura Tenga maodha; Kutengesa Tengesa - on / off. kuvhura Tengesa maodha; Manage echinyorwa odha-iyo nyanzvi Chipangamazano ichagadzirisa mirairo yemushandisi; Pakutanga mijenya - yekutanga mijenya; Kuwedzera Roti - mugove wakawanda wemirairo inotevera; Autolot - gonesa / regedza otomatiki kuverenga kwejenya; Saizi ye Autolot - huwandu hweDepositi iyo iyo […]
Iyo yekutengesa chikuva inogamuchirwa kune vese vane ruzivo vatengesi uye vanotanga. Iyo EA ine chengetedzo kubva kumusoro kwakapararira uye inoita kuti iwe uchinjane neyakafanotemerwa kana otomatiki mijenya mijenya. kuteedzera kwebasa chairo, kuwedzera kune kumwe kunatsurudzwa kunogona kuonekwa pano: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Telegraph iri pano. Input parameter nyowani Cycle-kana chimiro chashandurwa, iyo EA inoshanda isingaregi, kana iyo modhiyo yadzimwa, iyo EA haizovhure mirairo mitsva pakupera kweakateedzana emabhizimusi; Trade Tenga - pa / kure kuvhura Tenga maodha; Kutengesa Tengesa - on / off. kuvhura Tengesa maodha; Manage echinyorwa odha-iyo nyanzvi Chipangamazano ichagadzirisa mirairo yemushandisi; Pakutanga mijenya - yekutanga mijenya; Kuwedzeredza Roti - yakawanda mijenya kune inotevera mirairo; Autolot - gonesa / regedza otomatiki kuverenga kwejenya; Saizi yeAotolot - huwandu hweDepositi iyo iyo EA ichazoshandisa iyo Roti iyo kana Auto lot inogoneswa; Kure - kure pakati pemirairo; Max Lot - iyo yakanyanya kuwanda iyo iyo EA inogona kuvhura; Max tenga maodha -singaverengeke nhamba yekutenga odha; Max kutengesa maodha ndiyo yakanyanya kuwanda nhamba yekutengesa odha; Tora Pundutso, zvinongedzo (0 - usashandise) - tora purofiti mune mapoinzi; Sarudzo Tora Mari-pedyo nekutora purofiti pakuvhura kwe […]
Metatrader 4: Forex zviratidzi
Mutengo - 49.99 USD
kukwirira uye kudzikira kwemutengo. Kuti zvive nyore kumutengesi, pundutso inogona kuwanikwa yechiratidzo chega chega inoratidzwa pachati. Chiratidzo hachichadzokeri patsva, chiratidzo chinowoneka mushure mekunge bhawa ravhara. chiratidzo chitsva kuemailSendPushNotification-inogonesa kutumira push notices nezve new signalProfitPointer-inoratidza ruzivo nezve ingangoita purofiti yechiratidzo pachatiArrowSize - saizi yechinongedzera chiratidzo pane
Zviratidzo MT4 MT4 Forex Maitiro
Mutengo - 2 500 USD
Ichi chiratidzo chikamu cheRPTrade Pro Solutions masisitimu.DTS chiratidzo chezuva nezuva chinoshandisa Mutengo Chiito, Rutsigiro Rwesimba uye Resistances. Iyo yakagadzirirwa kushandiswa nechero munhu, kunyangwe iwo wekutanga mhedzisiro mukutengesa anogona kuishandisa. HAPANA kumbochinja zvakare. Zviratidzo zvinopihwa kubva padyo kusvika pakuvhara. Yakagadzirirwa kushandiswa yoga, hapana zvimwe zviratidzo zvinodiwa. Inokupa iwe maitiro uye angangoita Tora Profit pakutanga kwezuva. Inoshanda sei DTS irikushandisa nzira yekubuda yakasanganiswa nemutengo chiito uye Simba Rutsigiro neResistances. Maitiro ehusiku uye kusagadzikana zvinoongororwa kuti zvishandiswe pazuva rinotevera. Kubva pakuongorora uku kwakatemwa miganho yekubuda (yebhuruu uye yakasviba mitsara yeorenji) uye zvakare Tora Profit Iyo "kubudirira" kwechirongwa uye marongero anogona kuongororwa ipapo ipapo nekuda kweiyo Nhoroondo dhata. Chikamu chenhoroondo chinotendera kuti uone nekukasira kana paine "maburi" mune zano uye pakupedzisira sarudza imwe TimeFrame kana Chiratidzo chinokwana zvirinani. Munguva chaiyo kubva kukenduru padyo nekenduru vhara iyo ratidziro chiratidzo inomirira kuti mamiriro echiratidzo ave anoshanda wozozviratidza nemuseve (girini yekutenga uye orenji yekutengesa). Iyo tsvuku dash madhiraini mitsara inoratidza kupi […]
Mutengo - 19 USD
mhedzisiro yacho yakaipa pavari
Metatrader 5: Forex nyanzvi Advisors
Mutengo - 239 USD
"Super Wave MT5" inogadzirisa nyanzvi chipangamazano zvichibva pabhendi maitiro. Iyo ine yakavakirwa-mukati yakasarudzika mutengo wekutevera algorithm, yakagadzirwa chaizvo yekutengesa EURUSD. Dzakamirira mirairo yekudzoserwa kwemutengo wega wega. Chiitiko chega chega chinoongorora zvazvino mutengo wemitengo uye kuchinja. Mira kurasikirwa kubva pakutanga, uye uwane purofiti kubva pazviri. Inotengeswa pa60% mutengo wepakutanga, $ 239 USD mavhiki maviri chete! mutengo wepakutanga i $ 2 USD. "Super Wave MT399" inogadzirisa nyanzvi chipangamazano zvichibva pabhendi maitiro. Iyo ine yakavakirwa-mukati yakasarudzika mutengo wekutevera algorithm, yakagadzirwa chaizvo yekutengesa EURUSD. Dzakamirira maodha emutengo wega wega wekudzosera. Dzakamirira kuodha
Nyanzvi Advisors MT5 MT5 Forex Maitiro
*** Come a negociar na bolsa brasileira of forma automática *** - 50% OFF - Preço inaugural $ 50 - Próximo preço $ 100 —O Ichimoku Ninja EA ndiyo nzvimbo ye Mini-icendice (WIN) e Mini-Dólar (WDO), negociados na bolsa brasileira.O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo, de acordo com sua dinâmica.Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme a Banda de Bollinger, de acordo como Período do Kijun eo desvio padrão estabelecido.É possível configurar também um sistema de trail, conforme a dinâmica da Banda de Bollinger, de acordo
Mutengo - 199 USD
Iyi ndeimwe yeakanakisa nyanzvi maAdvisor ekutengesa goridhe. Iyo Nyanzvi Advisor inogona kubudirira kushambadzira pamapuratifomu evatengesi vakasiyana vane akasiyana mamiriro ekutengesa, uye inokodzera netting uye hedge account. Iyo Nyanzvi Advisor inoratidza yakagadzikana kuita pamusoro pemakore gumi apfuura. Iyo yekumisikidza marongero akafanana neyakagadzikana mashandiro, asi mhedzisiro inogona kuve akati wandei maodha ehukuru hwakakwira. Zvakanakira: Iyo shoma maseturu inokutendera iwe kukurumidza kusarudza iwo akakwana parameter. Iyo Nyanzvi Advisor ine matatu masisitimu ekudzoreredza mushure mekurasikirwa. Nguva dzose shandisa yakamiswa Stop Loss uye Tora Profit. Pamitengo yakakwana yezvikamu zvekuisa, iko kudonha hakupfuure makumi matatu muzana. Tsigiro yemahedge uye netting maakaunzi. Inoenderana nemitemo yeFIFO. Izvo zvishoma zvegadziriro zvinokutendera iwe kuti usarudze nekukasira iwo akakwana parameter. Iyo Nyanzvi Advisor ine matatu masisitimu ekudzoreredza mushure mekurasikirwa. Nguva dzose shandisa yakamiswa Stop Loss uye Tora Profit. Pamitengo yakakwana yezvikamu zvekuisa, iko kudonha hakupfuure makumi matatu muzana. Tsigiro yemahedge uye netting maakaunzi. Inoenderana nemitemo yeFIFO. Mamiriro Engozi: Yakadzika / Pakati / Yakakwira Roti Rudzi: Yakagadziriswa / Auto Roti saizi / muzana StopLoss ToraProfit Slippage Magic Nhamba Njodzi Mode: Yakadzika / Pakati / Yakakwira Roti Rudzi: Yakagadziriswa / Auto Roti saizi / muzana StopLoss TakeProf
Metatrader 5: Forex zviratidzi
Mutengo - 30 USD
Ruzivo rwekuvandudza: ▸ Mutsara kukosha uye mavara: Buffer 0: ZigZag mutsara kukosha; Bhafa 1: ZigZag kukosha kwemavara; Buffer 2: Median mutsara kukosha; Buffer 3: weMedhia kukosha kwemavara; ▸ Buffer kuti utore hunhu hwega yega yepamusoro uye yepasi Buffer 5: Kukosha kwepamusoro; Buffer 6: Bhodhoro kukosha; Ruzivo rwekuvandudza: ▸ Mutsara kukosha uye mavara: Buffer 0: ZigZag mutsara kukosha; Bhafa 1: ZigZag kukosha kwemavara; Buffer 2: Median mutsara kukosha; Buffer 3: weMedhia kukosha kwemavara; ▸ Buffer kuti utore hunhu hwega yega yepamusoro uye yepasi
Zviratidzo MT5 MT5 Forex Maitiro
Mutengo - 99 USD
Tom DeMark akagadzira TD Sequential neruoko, kuburikidza neyakaitwa muyedzo uye kukanganisa, muma1970. Hazvimboregi kundishamisa kuti chimwe chinhu chakatanga kugadzirwa sei kuongorora data yemitengo yezuva nezuva ingashandiswa zvakaringana, anopfuura makore makumi matatu gare gare, kune chero nguva-kubva paminiti imwe kusvika gore rimwe- uye kune chero musika. Iyo chiratidzo ine zvinhu zviviri: TD Setup, iyo inotsamira pakukurumidza kutsanangura mitengo yemitengo, uye TD Kuverengera, inova mamiriro akavakirwa, uye inotsvaga mikana ine njodzi-shoma yekudzima akasimba enongedzo mafambiro. Tom DeMark akagadzira TD Sequential neruoko, kuburikidza neyakaitwa muyedzo
Mutengo - 40 USD
Misika inonyatsoda manhamba akapoterera uye ivo vanowanzo shanda senge rutsigiro mumusika unodonha, kana kuramba sezvo mutengo unokwira. Ichi chiratidzo chinogadzirirwa kukwevera mitengo yemitengo paRound values. Inoita izvi otomatiki, asi iwe zvakare une sarudzo yekuwedzeredza izvo uye kuona matanho aunoda kuona. Chikamu chakatenderera chinogona kuve chakareruka sematanho e10, saka gumi, 10, 20 nezvimwewo kana kana iwe uri kushanda neE Forex, pamwe iwe unoda kuona shanduko pa30 kana 0.1. Iyo chiratidzo chinodhirowa makirasi maviri emutsara, Makuru neMadiki, rimwe nerimwe riine fomati yakasiyana. Izvi zvinokutendera kuti iwe uone shanduko pakati pekuchinja kwakasiyana kwakasiyana padanho panguva imwe chete. Iyi ndiyo MT0.01 vhezheni yeiyo Indicator. Kana iwe uchida iyo MT5 vhezheni, enda apa: Kuchenjerera iyo chiratidzo kunosanganisira kugona kuridza zviyeuchidzo paMajor, Madiki kana ese ari maviri matengo emitengo kana mutengo unouya mukati mechikamu chinogadziriswa. Otomatiki Setup Nekushomeka, chinongedzo chinosarudza danho rakakodzera kune ese maMahombe neMidiki mitengo. Izvo zvinoita izvo uchishandisa inogadziriswa DensityIndex seti iyo inodzora mangani mitsara iwe yaunoda kuona pachiratidziro chero nguva. Kana iwe ukamisa yako […]
Forex Robhoti Ongororo yeMT4
Mutengo - 77 USD
Mutengo - 201 USD
Avatar ndeyeTrend Retracement EA inoshanda pane anotevera maviri aripo panguva yeH1 nguva..Inotarisa Kudzoreredzwa kweMutengo kunyanya zvichibva paSuperTrend uye zvimwe zviratidzo.Mamwe mapaviri akaisirwa mafaera achawedzerwa mumashoko mumazuva mashoma mushure mekudzokedzana kwakawandaGBPUSDGBPAUDEURUSDEURGBPAUDUSDAUDNZDUSDJPYChikumbira tsvaga mafaera akaisirwa pamusoro pevaviri muchikamu cheMashoko
Mutengo - 299 USD
Yemahara kune avo vanovhura account 👉🏻 https://bit.ly/Broker_AxiTrader ine hushoma kuenzana ye $ 500 Inoshanda pane ese mari uye simbi mbiri, unogona kusanganisira akati wandei panguva imwe chete, ini ndinokurudzira kushandisa 4 mapaundi kune ese 250usd yemari iripo. sets> https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 kurudziro Inokurudzirwa dhipoziti yakaderera ndeye $ 250. shandisa broker weECN ine goho rakaderera uye nekukurumidza kurongeka kuuraya. Yakakurudzirwa: Axitrader kana Icmarkets Main zviratidzo: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD uye USDJPY. Mazuva ekupedzisira: H1 yemhedzisiro yekutengesa, shandisa VPS nekukurumidza kubatana. https://t.me/FxTraderExperts chiteshi teregiramu Mahara kune avo vanovhura account 👉🏻 https://bit.ly/Broker_AxiTrader ine hushoma chiyero che $ 500 Mahara kune avo vanovhura account 👉🏻 https: // zvishoma. ly / Broker_AxiTrader ine hushoma hwakaenzana ye $ 500 Inoshanda pane ese mari uye simbi mbiri, iwe unogona kusanganisira akati wandei panguva imwe chete, ini ndinokurudzira kushandisa mana maviri maviri e4usd yemari iripo. sets> https://www.mql250.com/en/blogs/post/5 kurudziro Inokurudzirwa dhipoziti yakaderera ndeye $ 740296. shandisa broker weECN ine goho rakaderera uye nekukurumidza kurongeka kuuraya. Yakakurudzirwa: Axitrader kana Icmarkets Main zviratidzo: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD uye USDJPY. Mazuva ekupedzisira: H250 yemhedzisiro yekutengesa, shandisa VPS nekukurumidza kubatana. https://t.me/FxTraderExperts
Forex Zviratidzo ongorora yeMT4
Forex Raibhurari yeMT4
Auto Swing Goridhe
Iyo Auto Swing Goridhe EA ichagadzirisa mashandiro ekutengesa evatengesi vanofamba, anoshanda pakunaka kwake neGOLD kana XAUUSD pa30 Minute Nguva Yakatarwa. Kubva muna20 Chikunguru 2020 kusvika 31 Zvita 2020 mhedzisiro yekupedzisira, iyi EA inokwanisa kuwana 5000% pasi pegore PASINA chero njodzi yakakura kana nzira dzine njodzi sekuwedzera mijenya mushure mekunwa kana kurasikirwa nekutengeserana (inozivikanwawo seMartingale, D'Alembert uye nezvimwe ..) idzi nzira dzakakwirira dzengozi dzakatoparadza mazhinji emaakaundi ekutengesa. Kunyangwe iyi EA isingashandisi chero yeaya maitiro, inogona kuwana 1000% ye ROI
PZ Vhura Range EA
yakakonzerwa inopinda mutengesi mukutengesa uye imwe yekumira inova iyo yekumira yekudzivirira.Crabel tsvagiridzo inoratidza kuti pakutanga mune yekutengesa musangano iyo yekumira yekumira yakarohwa zvakanyanya mukana wekutengeserana uchave unobatsira
Nhau dzichangoburwa kubva kunyika ye forex
Wepamusoro 5 marobhoti ekutengesa purofiti pane forex muna 2021
Kunze kwenyika kuchinjana kutengesa ndeimwe nzira yekuita yakakura pamwe nekudzikama mihoro mune zvine musoro pfupi nguva. Kutsvagurudza misika yepasi rose, kunyatsoitika mamiriro ezvematongerwo enyika anokanganisa misika iyoyo, pamwe nekuongorora kuchengetedzeka kweimwe mamiriro ezvehupfumi zvinhu zvinobatsira muzvinabhizimusi kuongorora kuti ndeipi mari yepasi rose ichasimbisa kuiswa kwavo uyezve nekudyara kwemari kwakanyanya kugadzirwa. Nyanzvi pamwe nevatengesi vane hunyanzvi vanoita mazana emadhora nekungobata mari yepasirese panguva chaiyo. Nehunyanzvi inotaridzika kunge yakatwasuka, zvisinei haasi munhu wese anogona nyore kuongorora akasiyana maficha anokonzeresa kubudirira kwebasa. Zvakareruka kune aya mamiriro, otomatiki ekutengesa marobhoti akave akagadzwa kubatsira chero munhu kuti abudirire. Akawanda emabhizimusi ekutengesa anobatsira eMT4 pamwe neMT5 pane yedu saiti. Parizvino tinoda kukuzivisa iwe maererano neyakanakisa marobhoti aya. 1. FX Rapid EA anoshanda kwazvo forex chipangamazano kwenguva refu purofiti Webhusaiti: fxrapidea.com Mutengo: $ 349 Mari yemaviri maviri: EURUSD, NZSUSD, AUDUSD pamwe neUSDJPY NguvaFrame: Chero Platform: Metatrader 4 FX Rapid EA ongororo pa fxbotreview.com Kuva nehunyanzvi uye hwakasimukira mushambadziro system […]
Forex Zvemabhatiri Forex Pamusoro
Wepamusoro gumi Forex Nyanzvi Advisors mumakore gumi apfuura
Vatsva kumusika we forex vanowanzoedza nzira nyowani uye nzira dzekuburitsa purofiti pamutengo wakaderera kwazvo. Kuti vaite izvi, ivo vanoshandisa nyanzvi vanachipangamazano - maturusi anokwanisa kuita otomatiki basa remutengesi. Zvirinani michina yekushandisa pinda muzvikamu, izvo zvinokutendera iwe kusarudza chaiyo software kune yega yega kesi. Nei uchishandisa forex marobhoti? MetaTrader 4, iyo yakatanga kuburitswa makore gumi nemashanu apfuura, iri kudiwa pakati pevatengesi nhasi. Mumakore ayo gumi pamusika, chikuva chakapfuura nekuvandudza kwakawanda, kuchichiita mutungamiri pakati pemakwikwi. Nekuda kweizvozvo vazhinji vemazuvano maAdvisor Advisors akagadzirwa zvakanangana neMetaTrader 15 neMetatrader 4 futi. Ngatiratidzei zvikonzero zvikuru nei zviine musoro kushandisa marobhoti ekutengesa e forex: - kurerutsa kwekutengesa, kunoenderana nevatangi; - Kuwedzera kwekuita purofiti pasina mari dzekuwedzera; - Kugadziridza kwemaitiro ebasa; - Kushandiswa kwemaitiro matsva ekutengesa uye maturusi. Kazhinji, vatengesi vatsva vanotanga yavo yekutengesa ruzivo ne demo account. Iyi inzira iri nyore yekuyedza akasiyana masystem uye maturusi uye kuwana ruzivo uye ruzivo. Kana uchishanda neaccount chaiyo, zvinokurudzirwa kuti uwane yakavimbika Forex Nyanzvi […]
Metatrader 5 Nyanzvi Advisors Ongororo
Mutengo - 200 USD
Nyanzvi inhengo yeangu nyanzvi optimizer chirongwa. Iyo inomhanya nemafaira ekuchengetedza ma parameter, maparamendi ekuisa uye webhu yekukumbira mutengesi parameter. Nyanzvi dzinoshandisa zviratidzo zviviri zvakabatanidzwa kugadzira bhizimusi kupinda pamwe nepo iriko kubva mukutengesa.Ndinotora makore maviri kuti ndiongorore maitiro ekuyedza aya neakaundi account, demo account murefu nguva. Sekutengesa nemutengesi neakagadziriswa paramende neyakaoma yekumira-kurasikirwa kunohwina mutambo. Ini ndinogadzira maitiro ndichishandisa Hybridge yekumira-kurasikirwa iyo inosanganisa yakaoma kumira-kurasikirwa uye chaiyo kumira. Iyi nyanzvi inoda vhiki nevhiki optimizer maitiro saka ini ndinogadzira yakapusa basa maitiro kuita basa kubva optimizer uye wozo muyedza. Mushure mekumhanya tester ine yakanakisa optimizer mhedzisiro. Nyanzvi ichachengeta mhedzisiro yekupedzisira mufaira remuno. Kana yaiswa muchati ichaisa yekupedzisira optimizer mairi uye yakagadzirira kumhanya. Unogona kuyedza dzakasiyana chiratidzo uye vaviri, nyanzvi inogona kuchengeta iwo kukosha mune imwechete faira. Zviri nyore kumhanya yakawanda-chati mune desktop kana neVPS. WebApiServer = "expertoptimizer.com"; Signal_ThresholdOpen = 2; // Chiratidzo chechikumbaridzo chakakosha kuvhura [2… 10] Signal_ThresholdClose = 0; […]
Isa kuzoshanda iye zvino Hama mbiri EJ12 iyi inoshamisa EA yakanyatsogadzirwa uye kuyedzwa iyo EUR / JPY musika chete mu5m nguva furemu, chinangwa cheEE ndechekuchengetedza capital yako zvakachengeteka kuseri kweiyi inoshamisa Shogun uye account yako haisati yasvika ku $ 0. EA iyi inogona kushandiswa nemari diki diki $ 100, ndakaiyedza ne $ 50 uye inoshanda zvakakwana asi zvinokurudzirwa kutanga nemari yepasi $ 100, ndinokurudzira kushandisa VPS. Iwe unogona zvakare kushanda yakakwira capital, iwe unongofanirwa kukwidza mijenya zvinoenderana neyako
Mutengo - 490 USD
Iyo otomatiki yekutengesa nyanzvi inogadzirirwa yekureba-kwenguva yakagadzikana kukura, uchishandisa rutsigiro uye nematanho emazinga uye Fibonacci nguva nguva munzvimbo yayo yekutengesa. Nguva dzose inoisa Stop Loss uye Tora Mhindu kuchengetedza dhipoziti. Iyo Nyanzvi Advisor haishandise: arbitrage, martingale, grid uye mamwe maitiro akafanana. Kurudziro Mari mbiri "GBPUSD". Nguva Yakatarwa: H1; Minimum dhipoziti: $ 100; Rudzi rweakaundi: ECN. Parameter Mashiripiti Nhamba - iyo nhamba yekuzivisa yeiyo EA yekuraira; Mhinduro EA-order comment; Fractal Daro - diki diki pakati pezvipenga; Bhara Trail Stop - iyo nhamba yemabhawa ayo anoshandiswa kuona iyo "Stop Loss" nhanho (kubva pa3, 0-kure); FastBarsTrail - inokurumidza yekumira yekumira; SweechPercentTrail-switching kune yekumhanyisa yekumira yekumira mu% kubva pa0.1 kusvika pa1; Mari Management: Yakagadziriswa Lot-kutengesa ine yakatarwa yekutengesa vhoriyamu; Yakagadziriswa Njodzi-kutengesa ine njodzi yakatarwa; Yakagadziriswa Margin-kutengesa ine yakatarwa margin; Saizi Yakagadziriswa-kutengeserana neakagadziridzwa ekutengesa vhoriyamu; Nguva dzose inoisa Stop Loss uye Tora Mhindu kuchengetedza dhipoziti. Iyo Nyanzvi Advisor haishandise: arbitrage, martingale, grid uye mamwe maitiro akafanana. Iyo Nyanzvi Advisor haishandise: arbitrage, martingale, grid uye mamwe maitiro akafanana. Kurudziro Mari mbiri "GBPUSD". Nguva Yakatarwa: H1; Chinyorwa chidiki: $ 100; Rudzi rweakaundi: ECN. Parameter Mashiripiti Nhamba - iyo chitupa nhamba […]
Forex Zviratidzo ongorora yeMT5
Forex Zvishandiso yeMT5
Mutengo - 100 USD
Dieser Scalper-Helfer hilft Ihnen, Ihren Trader zu verwalten, indem er AUTOMATISCHE Inomira uye Inotora platziert. Wenn Sie eine Position eingehen und sich der der Markt schnell gegen Sie wendet, ist das ziemlich langweilig, nicht wahr? aber mit die Helfer werden Ihr StopsLoss und TakeProfit AUTOMATISCH sein, konfigurieren Sie einfach wie viele Pips Sie wollen und das war's. Außerdem hat der Helfer AUTOMATIC BreakEven, Sie wählen einfach die Anzahl der Pips, die Sie platzieren möchten, und schließlich enthält er einen Stop-Protektor, der immer dann, wenn eine Kerze zu Ihren Gunsten schlieunter, den den Stopt,
MT5 Forex Maitiro Zvishandiso MT5
MT5 KUNE Biannce kopi
Mutengo - USD
使用 此 EA 可以 通过 币 安 交易所 的 API 连接 到 MT5 交易 端 ， 利用 MT5 强大 的 量化 功能 实现 交易 策略 的 回 测。 操作 方法 ： 1 在 导航 栏 找到 EA ， 双击 之后 添加 币 币 安 的 API CHINOKOSHA ， 保存后 ZVINOKOSHA 自动 保存 ； 2 ZVINOKOSHA 保存 后 会 出现 交易 面板 ， 通过 MT5 下 的 订单 可以 实时 展现 在 面板 ， 同事 也 可以 监控 币 安 安 是否 有 同样 的 订单 ； 3 交易 面板 只 展示 订单 的 总 持仓 ， 请仔细 核对 ， 以 防止 漏 单 ； 4 API KIYURE 会 自动 保存 在 本地 ， 第二 次 打开 后 无需 重复 输入 ； 5 目前 只能 支持 BTCUSDT 、 ETHUSDT 、 LTCUSDT 合约 产品 6 最小 交易 量 以 币 安 的 最小 交易 交易 量； ； 7 币 安 CHINOKOSHA 是 存储 在 本地 ， 不会 上传 到 任何 第三方 ， 请 放心 使用 ； 8 如果 想 更换 CHINOKOSHA ， 请 直接 在 EA 内 修改 即可
Statistics Akaunti manhamba ⭐ Nyevero nezvekutengesa zviitiko maakaunzi uye chinongedzo chinzvimbo ⭐ Signal kopi kuburikidza neiyo inokurumidza Internet server Лидер Leaderboard yemasaini inopa vanopa ⭐ Graphic ergonomic dhizaini kutsanangurwa kwakadzama kwenzvimbo dzinoona nhamba kuburikidza ne "ko kana?" Sefa .. ”- uyu ndiwo mukana wekuyedza fungidziro yekutengesa nekusiyiwa kwezvinzvimbo zvisina basa kubva kuhuwandu hwekutarisisa huyero uye margin mazinga akakosha kwauri kuti ugamuchire nyevero kana dzikasvikwa neemail, pushmessage, kana yambiro yeruzha iwe yaunokwanisa zviziviso nezve zviitiko zvese zvekutengesa pane yako account pamwe nezviziviso
Iwo musika unopa huwandu hukuru hwe otomatiki ekutengesa marobhoti, zviratidzo uye zvinyorwa zvemusika wepamberi. Mutengesi wega wega anoti ndiwo software yavo anogona kukuita mupfumi. Basa redu guru nderekutora yakatendeseka uye yakajeka software ongororo.
Nhamba: 11 Categories 0 Locations 5842 Resources 12370 Reviews
Wona Zvese Forex Software
Iyo isina-purofiti chikuva chekutendeseka kuongororwa kweiyo forex software. Tine dhatabhesi hombe kwazvo yekutengesa marobhoti, zviratidzi, zvinyorwa zveMT4 uye MT5 mapuratifomu ekutengesa. Imwe neimwe ongororo yako inogona kuchengetedza vangangove vatengi kubva kune vanotsamwisa. .
Isu hatitengesi Forex Nyanzvi Advisors, zviratidzi uye nezvimwe isu tinongoburitsa ongororo!
Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kugara uchibata manejimendi uchishandisa fomu rekupindura.
© 2021 Copyright ne fxbotreview.Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Batsira kugadzirisa FxBotReview
Ndokumbira usiye ongororo yako kana iwe watove wakashanda neiri software.
Fxbotreview inharaunda yealgotraders.
Chinangwa chedu ndechekugadzira chikuva chakatendeseka uye chakajeka ratings (EA, Indicatos)
Isu tatoita ongororo pazvirongwa zve5000 +.
Ini ndinosiya wongororo :)